TOPNEWS:- Axmed Siilaanyo oo ka hadlay Shirarka Madaxda Soomaalida | kowtharmedia.com
Home WARAR TOPNEWS:- Axmed Siilaanyo oo ka hadlay Shirarka Madaxda Soomaalida
TOPNEWS:- Axmed Siilaanyo oo ka hadlay Shirarka Madaxda Soomaalida
Madaxweynaha Maamulka Soomaaliland Axmed Maxamed Siilaanyo oo maanta Warbaahinta kula hadlay Magaalada Hargeysa ee Caasimadda Soomaaliland ayaa ka hadlay Arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin Wada-hadaladii Soomaaliya iyo Soomaaliland ee Burburku ku yimid iyo Shirarka ka socda Soomaaliya ee looga hadlayo Aayaha Soomaaliya.
Madaxweyne Siilaanyo ayaa ku baaqay in dib loo bilaabo Wada-hadaladii Soomaaliya iyo Soomaaliland ee burburku uu ku yimid islamarkaana Beesha Caalamka ay wada hadaladaasi ay dhex dhexaad ka noqoto si miro dhal looga gaaro wada-hadalada.
“Waxaan ku baaqayaa in dib loo bilaabo wada hadaladii uu hakadka ku yimid ee u dhexeeya Labada Dal Ee kala ah Soomaaliya iyo Soomaaliland,taas oo ay dan ugu jirto Labada Shicib ee Soomaaliya iyo Soomaaliland”ayuu yiri Madaxweyne Siilaanyo.
Sidoo kale Madaxweynaha Soomaaliland Axmed Siilaanyo ayaa Amaanay Shirarka ka socda Soomaaliya ee looga hadlayo Aayaha Soomaaliya,waxaana uu u rajeeyay Ummadda Soomaaliyeed in ay Dhibka ka baxaan oo ay helaan Dowladd Taam ah.
Madaxwaynaha Somaliland Axmed Siilaanyo ayaa hadalkan ka sheegay khubad sannadeedkii uu u jeediyay Labada aqal baarlamaan ee Somaliland
Previous PostGanacsade Caan ah oo lagu Dilay Qarax Degmada Afgooye Next PostIiraan: “horta Jabuuti xaggee ku taallaa?”